AKHRISO:- Madaxweynaha maamulka Koofur Galbeed oo magacaabay xilal cusub – SHABAKADA HIIRAAN XOG
HomeWararka SoomaaliaAKHRISO:- Madaxweynaha maamulka Koofur Galbeed oo magacaabay xilal cusub
AKHRISO:- Madaxweynaha maamulka Koofur Galbeed oo magacaabay xilal cusub
14/01/2018 Wararka Soomaalia 0
Hiiraan Xog, Jan 14, 2018:- Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa magacaabay Guddoomiyaha cusub ee Maxakamadda Sare ee maamulkaasi iyo Xeer ilaaliyaha guud ee Koonfur Galbeed.
Digreeto ka soo baxday xafiiska Madaxweynaha Maamulka Koonfur Galbeed ayaa lagu magacaabay Guddoomiyaha Maxkamadda Sare iyo Xeer ilaaliyaha oo markii ugu horeysay uu yeesho Dowlad Goboleedka K/Galbeed.
Madaxweyne Shariif Xasan ayaa Guddoomiyaha Maxakamadda Sare u magacaabay Axmed Cali Muuse, kaasi oo bedelaya guddoomiyihii hore ee Maxakamadda Sare oo horey xilka qaadis loogu sameeyey.
Sidoo kale Digreetada xafiiska Madaxweyne Shariif Xasan ka soo baxday waxaa lagu magacaabay Xeer Ilaaliyaha guud ee maamulkaasi Koonfur Galbeed, kaasi oo loo magacaabay Maxamed Macalin Cabdiyow.
Madaxweyne Shariif Xasan ayaa kula dardaarmay mas’uuliyiintani in ay xilkoodi u gutaan si hufan, islamarkaana ay qabtaan adeegyada ay uga baahan yihiin bulshada ku dhaqan degaanada Koonfur Galbeed.
AKHRISO:- Sheekh Axmed Shaakir oo ka hadlay shirka magaalada Dhuusa-Mareeb
Dagaalyannada Al shabaab oo dagaal kula wareegtay deeganka Ceelka Geelow ee duleedka Balcad